Ogaden News Agency (ONA) – Xafladii Sanad Guurada 30 aad ee JXWO oo hada sitoos ah uga bilaabatay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Waxaa hada daqiiqado ka hore bilaabatay xaflad si heersare ah loosoo abaabulay oo lagu xusayo sanad guuradii 30 aad ee kasoo wareegtay tan iyo markii la aas aasay Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya(JWXO) August 15 1984. Xafladan oo mudo dheer lasugayey ayaa diyaar garowgeedii aad looga dareemayey guud ahaan gobolka Minnesota gaar ahaan magaalooyinka mataahana ah ee Minneapolis/ Saint Paul. Waxaa sidoo kale kasoo qayb galay xaflada waftiyo badan oo kayimid gobolada kale ee dariska la ah Minnesota sida Colorado, Nebrasbka,
Mosoursi iyo gobolo kale.
Waxaa hada hoolka shirka soo buuxdhaafiyey dadweyn aad ufarabadan oo ruxaya calanka iyo astaamaha kale Ogaadeeniya. Xafladan oo kaduwan xafladihii hore ee lagu xusi jiray sanad guurada JWXO ayey dadku aad ugu faraxsanyihiin maadaamo oo ay tahay sanad guuradii 30 aad ee aas aaskii JWXO.
Waxaa iyaguna xaflada si aad ah uga soo qayb galay guud ahaan madaxda gobolka Minnesota, sida senators, U.S House of Representatives iyo madax kale oo kasocotay guud ahaan maamulka kala duwan ee gobolka.
Hadaba xaflada oo hada si aad iyo aad u quruxbadan uga socota Hotel Ramada kala soco warbaahinta Ogaadeniya qaybaha dambe ee xaflada.